I-Testosterone i-powder isocapronate (15262-86-9) i-hplc = 98% | AASraw
/ iimveliso / abanye / Testosterone Isocapronate powder
Akukho kalo SKU: 15262-86-9. Udidi: abanye
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-mass order ye-Testosterone Isocapronate powder (15262-86-9), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Testosterone Isocaproate powder, akusiyo i-anabolic steroid kodwa i-ester enokuqhotyoshelwe kwi-steroid ngendlela efanayo neCypionate eyaziwayo okanye i-Enanthate esters. Isocaproate inokuqhotyoshelwe kwihomoni ye-testosterone, kodwa kwimeko ye-Isocaproate oku kuya kuba yindawo kuphela esiyifumanayo.
Ividiyo yeTesttosterone Isocapronate powder
I-Testosterone Isocapronate powder Abalinganiswa basisiseko
igama: I-Testosterone Isocapronate powder
I-molecular Formula: C25H38O3
Isisindo somzimba: 386.5
Umjikelezo we-Testosterone Isocapronate powder
I-Testosterone Isocapronate powder (i-CAS 15262-86-9) amagama e-brand Sustanon 100 (ishiyiwe), i-Sustanon 250, i-Omnadren 250 okanye i-testosterone i-4-methylvalerate
I-Testosterone Isocapronate powder Ukusetyenziswa
Isocaproate, akuyiyo i-anabolic steroid kodwa i-ester enokuqhotyoshelweyo kwi-steroid ngendlela efanayo neCypionate eyaziwayo okanye i-Enanthate esters. Njenge-Cypionate kunye ne-Enanthate, i-Isocaproate inokuqhotyosheliswa kwi-hormone ye testosterone, kodwa kwimeko ye-Isocaproate oku kuya kuba yindawo kuphela esiyibonayo. I-Testosterone-Isocaproate, ifomu enye ye-ester ayifumanekanga; ukuba uyifumana oko kwakungekho myalelo okhethekileyo, kwaye akukho sizathu sokuba ufune i-Testosterone-Isocaproate kule fomu enye ye-ester. Lapho siza kufumana i-esterroate ester ngokuqhelekileyo kwaye apho isebenza khona inzuzo enkulu kwinxube ye testosterone; ngokukodwa u-Omnadren kunye noSustanon-250. I-Omnadren kunye ne-Sustanon-250 zombini i-testosterone ihlanganiswe neesters ezine eziqhotyoshelweyo; ezine zihluke ngobukhulu beesters ezihlukeneyo ezenza i-tottosterone iyonke. Kuzo zonke iinjongo ezinzulu, ezi zinto zimbini zifana; i-makeup yabo iyonke ifana ne-ester enye, kwaye ke uncedo olufanayo lunokufumaneka.
Iyiphi imilinganiselo ye-Testosterone Isocapronate powder
Ngazo zombini izixhobo unayo i-250mg / ml dosing ye testosterone kunye nomxube wee-smallest to esters ufumana iinjongo ezihambelana nazo zonke iifom. Ngokomzekelo, ufumana izibonelelo ze-testosterone eyenzayo ngokukhawuleza ngenxa ye-Propionate kunye ne-Phenylpropionate ester, kwaye ufumene inzuzo ye-testosterone ehlala ixesha elide ngenxa ye-Caproate okanye i-Decanoate ester. Ngokubhekiselele kwi-ester ye-Isocaproate, eli li-ester elinganayo elincinci elizalise indima phakathi phakathi komqondo phakathi kwama-esters amancinci amakhulu. Kukho nawuphi na, i-esterroate ester inendima ebalulekileyo njengoko inceda ukugcina amagangatho egazini egazini, kwaye ngequmrhu elipheleleyo ufumana inzuzo ye-testosterone ngexesha elide. Ngalokhu konke engqondweni, sifuna ukujonga ubunjani obubalulekileyo, izibonelelo zokuxhaswa, kwaye kunjalo, iziphumo ezichaphazelekayo zokusebenzisa kwaye ukwenza oko kukunika ithuba lokufikelela ngokuphumelelayo.
I-Testosterone Isocapronate powder isebenza njani
Njengoko i-Isocaproate nje i-ester, kungekhona i-anabolic steroid, sifuna nje ukuqonda i-hormone eqhotyoshelweyo kuyo, kwaye kulo mzekelo, loo hormone yi testosterone. I-Testosterone yi-anabolic enamandla kunye ne-androgenic steroid eveliswa ngabantu bonke kwaye ngokunjalo. Ngokuxhaswa, senza nje ukubonelela ifom yokwenza ngokusetyenziswa ngokungaqhelekanga; umzimba awukwazi ukumahluko kweli fomu eliqhelekileyo okanye oko kuvelisa ngokwemvelo; iyimodmoni efanayo. Ukudlala indima kwimpilo yethu yenyama, ngokwesondo nangokwengqondo, i-hormone ye testosterone ayibalulekanga, kwaye yinto kuphela eya kulungisa umgangatho wezantsi xa kufanelekile. Enyanisweni, ngokubonelela nge testosterone ngaphezu kwezinto ezinokuthi ziveliswe ngokwemvelo, ngokuthatha amanani ethu onke kumgangatho ophezulu sithucula izici; sithuthukisa ukusebenza njengoko kuninzi i-testosterone ekhona kumzimba. Ngenxa yokuncedisa okunjalo, ukuveliswa kweprotheni kuphuculwe, isantya-apho iiseli zakha amaprotheni, njengokuba kugcinwe i-nitrogen; i-nitrojeni emele i-16% yobungakanani bezinto ezihamba kuzo zonke izicubu zomzimba. Ukongezelela, ukongezwa okunjalo kwandisa inani elibomvu lamaseli egazi, ngaloo ndlela ukwandisa i-oxygenation yegazi, kwaye kwanciphisa ukuveliswa kwe-hormone ye-glucocorticoid. Kulabo abangazi ukuba yiyiphi i-glucocorticoids, zezi zi-hormone eziphazamisayo ezonakalisa izicubu ze-muscle kunye nokukhuthaza ukufumana amafutha.
Nangona ezo ziyimpawu ezintle, i-testosterone iphinda ikhulise i-Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1) mveliso; I-IGF-1 ibe yi-hormone ye peptide eyenziwa ngokusemthethweni yendalo ye-anabolic enamandla; singathethi sithwala iipropati ezinokuvuselela. Ngale ndlela kunye nazo zonke izicatshulwa ezikhankanyiweyo ngasentla, i-atmospheric anabolic esiphezulu iyaphuculiswa, i-metabolism yakho iyabuyiselwa kwaye konke kukukhokelela ekusebenzeni ngakumbi nangempumelelo. Ewe, unokuba ubuza ukuba lithetha ukuthini konke oku kuthethayo malunga neenzuzo, kwaye unokubuza ukuba yintoni le nto ithetha ngomqondo wokwelapha? Njengoko kuthethwa ngonyango lwonyango, zonke iimpawu ezixoxwa ngasentla zifunyanwe zilahleka kwaye zongezelelwa zibabuyiselwa kwizinga elifanelekileyo. Ukongezelela, njengoko i-testosterone ilawula i-libido yethu, umsebenzi wesondo kunye nokudlala indima kumanqanaba ethu omandla, ukucaca kwengqiqo kunye nesimo esiqhelekileyo zonke ezo ndawo ziphuculwe. Kakade ke, ezi zixhobo ze-testosterone ezisemgangathweni azinqabile ukuba zenzelwe iinjongo zokwelapha, ngokuqhelekileyo izixhobo ze-ester testosterone zisetyenziselwa ukufikelela esi siphelo; njengoko kunjalo, ukusebenza ngokwenene kukukuphela kokuxhalabisa apha, kwaye oko kusengqondweni makhe sijonge.
Izinzuzo ze-Testosterone Isocapronate powder
Izibonelelo ze-Isocaproate based compounds ezifana ne-Omnadren kunye ne-Sustanon-250 zingachithwa zibe zigaba ezimbini; izibonelelo ezifunyenwe ziimpawu ezingentla kunye nokuba luhlobo luni lwenkqutyana lunika ngokuthelekisa kwifom enye ye-ester. Njengoko kuthethwe ngethuba lokuqala, inzuzo yomxube we testosterone kukubonelela ngeyona nto ihamba phambili kwiimeko ezimbini zombini, kwaye oku kubonelela nge-testosterone esebenza ngokukhawuleza kunye nemiphumo emide ngexesha elide. Oku kungathi kunzulu kunzima, kodwa akukho nto ingakumbi kuyo. Emva koko sineenzuzo ezona zixhomekeke kwiimpawu ezingentla, kwaye njenge-Omnadren kunye ne-Sustanon-250 isetyenziswe ngokusisigxina ekusebenzeni siza kugxininisa kwiintlobo ezikuloo nto.
Ngomdlali we-season-off, umntu okhangele ukongeza amanani amaninzi obunzima kunye namandla, iifom ze-Isocaproate zikhethwe ngokugqibeleleyo njengoko ziza kukhuthaza ngokubanzi ukuphela kokuphela. Ukongezelela, ngokunyuka kwamaqondo omzimba, ngoku ukwazi ukufumana ubuninzi obuxumileyo kunye nokuqokelela kwamafutha amaninzi, kwaye oku kubaluleke kakhulu. Ngokuqinisekileyo, iifomathi ezifanayo zingasetyenziselwa ukusika kwakhona; emva koko, i-metabolism eyongeziweyo ithetha ukunyuka kwamafutha amaninzi, kwaye njengokuba u-testosterone ngumlondolozi omkhulu wesilondolozi sisisombululo esihle kakhulu kwisicwangciso ngasinye sokusika.
Ukuba oko akwanele, kungakhathaliseki ukuba yintoni injongo yokusebenzisa la maqhinga ase testosterone ase-Isocaproate aya kukhulisa ukunyamezela kwakho kwemisipha; baya kukwandisa izinga lakho lokufumana kwakhona kwaye banokunika amandla angaphezulu. Ngeke ukwazi ukukhawuleza ngokukhawuleza, uya kuphulukisa kwaye umzimba wakho uza kulungiswa ngokukhawuleza kwinqanaba eliphezulu, kwaye ukuba loo nto ayiyikuphucula ukusebenza. Ngeendlela ezininzi, i-testosterone steroid enye yeyona nto elula ukuyiqonda, enye yeyona nto elula kunabo bonke, kodwa ngoxa ilula ingaba ixabiseke kwaye mhlawumbi i-anabolic ne-androgenic steroid ebaluleke kakhulu. Ukongezelela, xa kuziwa kwindoda endala enempilo, yinto enye yezona zinto zibekezeleke, kwaye akukho nto ibaluleke ngaphezu kwayo.
I-Testosterone Isocapronate Powder (CAS 15262-86-9)
I-Testosterone Isocapronate powder Marketing
Ingaba i-Testosterone Isocapronate powder Ingaba nayiphi na imiphumo yangaphandle
Iimiphumo zecala ze-Isocaproate testosterone ziza kuba zifana nezo zonke i-testosterone iimveliso, kwaye oku kubaluleke kakhulu ukuba kunokwenzeka kwaye ngokubanzi i-100% igwenywa ngumntu omdala onempilo. Enyanisweni, indoda ekhulile inempilo ayithethi ukuba ulahlekelwa yimeko enzima, kodwa ithetha ukuba uxinzelelo lwegazi kunye neqondo le-cholesterol lifanelekileyo kwaye unempilo enhle kakhulu. Ukuqhubela phambili, ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kuyimfuneko, kwaye oku kuthetha ukuba uzimisele ukuncedisa ngendlela ekhuthaza ukuqhubekeka kwempilo enjalo; Ukuba unobungozi bomzimba wakho, le nto ayikwazi ukubhala njengomsebenzi ongezelelweyo. Kukho nawuphi na, makhe sijonge kwiimpembelelo zecandelo le-testosterone, thola oko unokukwenza ngabo kwaye uqinisekise impumelelo yakho.
Ukuba yinkampani ye testosterone, kwaye oku kuya kwiimpawu ze-Isocaproate ezifana ne-Omnadren kunye ne-Sustanon-250 okanye nayiphina inkomfa ongayicinga ngayo iya kuphazamiseka; i-aromatization ebhekisela ekuguquleni kwe-testosterone kwi-estrogen. Njengoko amazinga e-estrogen aphakama, oku kungakhokelela kwaye kufake isandla kwezinye zezonabolical effects of all-side effects of side effects; Ngombulelo, banokuphetshwa konke. Ngokuqinisekileyo, kukho enye i-side-effect eyenziwe ngokuqinisekileyo kubo bonke abantu abongezayo kodwa bengenanto engayisebenzisiyo; siza kuxubusha ukuba kamva kodwa masikukhathalele okokuqala; iziphumo ezichaphazelekayo ze testosterone ziquka:
• I-Gynecomastia - njengamazinga e-estrogen enyukayo, i-hormone ifakela kuma-receptors abangela i-gynecomastia okanye ukwandiswa kwesifuba samadoda, kodwa oku akufanele kwenzeke. Ngokusebenzisa i-Aromatase Inhibitor (AI) njenge-Anastrozole (Arimidex) okanye i-Letrozole (i-Femara) uya kuphepha loo mqathango. I-AI inqanda inkqubo ye-aromatase ukuba ivele, kwaye iyanciphise amanqanaba e-estrogen yomzimba; ukuba ayikho nto ayikwazi ukubangela ingxaki. Ewe, i-Selective Estrogen Receptor Modulators (i-SERM) nayo ingasetyenziselwa le njongo njengeTamoxifen Citrate (Nolvadex), kodwa kwiimeko ezininzi akwanele. Umsebenzi we-SERM ngokuzibophelela kubalamkeli ngokuthintela u-estrogen ekubophelelweni; abavimbeli i-aromatase okanye amanqanaba e-esrogen aphantsi, kwaye oku kuthetha ukuba i-AI yinyani yethu yoxolo.
Ukugcinwa kwamanzi - i-estrogen engaphezu kwe-aromatization iyona yecala, kwaye i-estrogen eyongezelelekileyo yenza ukuba ukhululeke ukubhubhisa rhoqo. Xa udla ngokutya, ikakhulukazi i-carbohydrate uya kubamba amanzi, kwaye ukuba amazinga e-estrogen aphezulu aya kuba nzima nakakhulu. Ewe, ukuba usebenzisa i-AI kwaye ulawule ukutya kwakho, akufanele ube neengxaki, kwaye ukuba usebenzisa i-AI kodwa usenamanzi ngaphezulu kunokuba oku kuthetha ukutya kwakho akufanelekanga njengoko unokukholelwa ukuba .
• I-Cholesterol ephezulu-i-estrogen engaphezulu iyakwenza inxaxheba kwizinga eliphezulu le-cholesterol ye-LDL, kodwa i-dosing kunye nendlela yokuphila yakho jikelele iya kudlala indima enkulu kunanoma yintoni enye. Ngenxa yesi sizathu, amanani athile afanelekileyo, kodwa ke uhlala ngendlela yokuphila eyi-cholesterol. Oku kuthetha ukutya okufanelekileyo, ukutya okuninzi kunye nokuphepha yonke into enokuba nefuthe elibi. Ukuba unokwenza oku, ucinga ukuba awunayo i-cholesterol ephakamileyo kufuneka ulungile.
Uxinzelelo lwegazi oluphezulu - i-estrogen engaphezulu kunokubangela ukuba uxinzelelo lwegazi luphezulu, kodwa ukulandelelana kunye nokuphila kwakho jikelele kuya kudlala indima enkulu kunanoma yini enye. Ngenxa yesi sizathu, amanani athile afanelekileyo, kodwa ke uhlala ngendlela yokuphila engumngcipheko wegazi. Oku kuthetha ukutya okufanelekileyo, ukutya okuninzi kunye nokuphepha yonke into enokuba nefuthe elibi. Ukuba unokwenza oku, ucinga ukuba awunayo i-genetic predisposition kwi-high blood pressure kufuneka ulungile.
Njengoko sikhankanywe, iziphumo ezilapha ngasentla ziyakwenzeka, kodwa kukho umphumo owodwa oqinisekileyo kubo bonke abongezayo; ukunyanzelwa kokuveliswa kwe testosterone yakho yemvelo. Oku akuyona ingqiqo ekhethekileyo kwiinkampani ze-testosterone ze-Isocaproate okanye nayiphina i-compto tesone; eqinisweni, ngumxholo oya kubamba inyaniso kuwo onke ama-anabolic steroids. Enyanisweni, ukunyuswa kwe testosterone yendalo kungakhokelela kwimeko ephantsi ye testosterone, kodwa kwimeko yakho, ekubeni uncedisa kunye ne-testosterone engenangxaki; emva koko, unika umzimba wakho konke okukufunayo. Nangona kunjalo, njengemveliso yemvelo ikhutshwe le nto iya kubangela ukuba ama-testicles akho atrophy, kodwa kukho iindaba ezilungileyo. Emva kokuba zonke izinto eziqhelekileyo ze-steroid zisetyenzisiwe kwaye zonke ihomoni ze-steroidal eziqhelekileyo ziye zacima inkqubo yakho yamathambo aya kubuyela kwisayizi yabo eqhelekileyo njengokwenziwa kwemveliso ye-testosterone iya kuqalwa kwakhona. Kufuneka kuqatshelwe; ukuphinda ucinge ukuba awuzange umonakalise kakubi i-HPTA yakho ngenxa yeendlela zokuncedisa okungekho nto, kwaye awuzange uphethwe yi-testosterone ephantsi ngaphambi kokuncedisa.
Indlela yokuthenga i-Testosterone Isocapronate powder (i-CAS 15262-86-9) esuka kwi-AASraw